टिभी प्रस्तोता रबि लामिछानेमाथि मोडल सोनिकाको फेसबुक वार ! « Naya Page
टिभी प्रस्तोता रबि लामिछानेमाथि मोडल सोनिकाको फेसबुक वार !
प्रकाशित मिति : 21 January, 2018 2:13 pm
काठमाण्डौ, ७ माघ : युवटुबमा छाडा (भल्गर) खालका भिडियो पोष्ट गर्ने र यस्तै ‘भल्गर’ लाग्ने खालका कार्यक्रमहरु सञ्चालन गरेर चर्चामा आएकी मोडेल प्रस्तोता सोनिका रोकाया अहिले टेलिभिजन पत्रकार रवि लामिछानेमाथि फेसबुक वार गरिरहेकी छन् ।
उनले विभिन्न माध्यमबाट रबि लामिछानेलाई धम्की दिंदै लामिछानेको काण्डहरु सार्वजनिक गरेर वेइज्जत गरिदिने बताइरहेकी छन् । उनले युट्युवमै भिडियो अपलोड गरेर रबिको धेरै कुरा आफूलाई थाहा भएको दावी गरेकी छन् । अहिले सोनिकाको उक्त भिडियो ‘भाइरल’ भइरहेको छ । सोनिकाले रबिसँगको आफ्नो असमझदारी के हो भन्ने स्पष्ट नखुलाएकी छैनन् । सोनिकाको उक्त भिडियो सार्वजनिक भएपछि उनको आलोचना गर्नेहरु दिनदिनै बढिरहेका छन् ।
यी हुन् सोनिका ?
सोनिका बझाङबाट धनगढी बसाई अहिले काठमाण्डौंमा छिन् । बाल्यकालदेखि ग्लामर क्षेत्रमा रुची भएकी सोनिका अहिले सोही सपना पूरा गर्दैछिन् । बुढानिलण्ठ माध्यमिक शिक्षा हासिल गरेकी सोनिकालाई परिवार भने डाक्टर, इन्जिनियर बनाउन चाहन्थ्यो ।
परिवारको इच्छा विपरीत पत्रकारितामा प्लस टु गरेकी सोनिकाको रहर नेपाली चलचित्रमा नै स्थापित बन्ने छ । उनले तीन वटा म्युजिक भिडियोमा मोडलिङ गरेकी छन् । उनले आफूलाई बोल्ड अभिनय गर्न रुची भएको बताउँदै आएकी छिन् ।
रवि लामिछाने नेपाली सञ्चार क्षेत्रमा स्थापित नाम हो । सन् २०१३ को अप्रिलमा नेपालको न्यूज २४ टेलिभिजनमा निरन्तर ६० घण्टाभन्दा बढी समय टेलिभिजन अन्तरवार्ता चलाएर उनले विश्व रेकर्ड कायम गरेका छन् । रवि लामिछाने अहिले न्यूज २४ टेलिभिजनबाट सिधा कुरा जनतासँग कार्यक्रम चलाउँछन् । केहि समय अमेरिका पलयान भएका रबि अहिले नेपाल फर्किएर सञ्चार कर्ममै छन् । अहिले उनी वीरगञ्जमा नेपाली भूमि मिचिएको कुरा सार्वजनिक भएपछि सोही क्षेत्रमा रिपोर्टिङ्गमा छन् ।